Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Manchester City Oo Farsamo Kale Ku Wajaheysa Harry Kane, Raphael Varane Oo Ka Tagaya Real Madrid, Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa kala iibsiga: Manchester City oo Farsamo kale ku wajaheysa Harry Kane, Raphael Varane oo ka tagaya Real Madrid, Iyo Qodobo kale
June 24, 2021 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Real Madrid ayaa muujineysa xiisaha ay u qabto xidiga Real Sociedad iyo weeraryahanka Sweden Alexander Isak, sida ay qortay jariirada AS .
Inter ayaa xiriir la sameysay Barcelona si ay ula soo wareegto Jordi Alba, sida ay qortay Mundo Deportivo.
Real Madrid ayaa aaminsan in daafaceeda Raphael Varane uu ka tagayo kooxda xagaagan, sida ay qortay The Athletic .
Crystal Palace ayaa qarka u saaran inay u magacowdo Lucien Favre tababarahooda cusub, sida ay qortay The Athletic.
Manchester City ayaa diyaar u ah inay sanad sugto Harry Kane hadii heshiiska weeraryahanka Tottenham uusan shaqeyn xagaagan, sida ay qortay ESPN .
PSG ayaa heshiis la gaartay Inter oo ku aadan saxiixa Achraf Hakimi, Kooxda Ligue 1 ayaa bixin doonta 70 million (£ 60m / $ 84m) oo ay kujirto gunooyin la siinayo ciyaaryahanka reer Morocco, kaasoo saxiixi doona heshiis shan sano ah. sida ay qortay ESPN .
Daafaca Manchester City Taylor Harwood-Bellis ayaa qarka u saaran inuu heshiis amaah hal xilli ciyaareed ah ugu biiro kooxda reer Belgium ee Anderlecht, sida ay xaqiijisay Goal .
Ryan Bertrand ayaa ku sii dhowaanaya ku biiritaanka kooxda Leicester City si bilaash ah inkastoo ay xiiseynayaan kooxaha Arsenal, Monaco iyo AC Milan, sida ay qortay Goal
Paris Saint-Germain ayaa xiriir la sameysay Sergio Ramos ka dib markii uu ka tagay Real Madrid , sida ay qortay Goal
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Everton James Rodriguez ayaa ka soo muuqday liiska Milan ee suuqa kala iibsiga – sida laga soo xigtay Calcio Mercato .
Arsenal ayaa diyaar u ah inay amaah ku siiso daafaca aan fadhin ee William Saliba kooxda Newcastle inta lagu jiro ololaha 2021-22 – sida laga soo xigtay Football Insider .